मन्त्रालयले भर्खरै जारि गर्यो यस्तो सुचना, भोलिबाट ७७ जिल्लामा यस्तो हुने ! – List Khabar
Home / समाचार / मन्त्रालयले भर्खरै जारि गर्यो यस्तो सुचना, भोलिबाट ७७ जिल्लामा यस्तो हुने !
admin August 18, 2021 समाचार Leaveacomment 214 Views
काठमाडौ । काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि भदौ ८ गतेसम्मलाई नि’ षेधाज्ञा लम्ब्याइएको छ। साथै यसअघि भन्दा कडा पनि पारिएको छ। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबीच मंगलबार भएको संयुक्त बैठकपछि जारी आदेशअनुसार राति ८ बजेपछि गाडी चलाउन नपाइने नियम राखिएको हो। उपत्यकामा बेलुकी आठ बजेपछि रातिको समयमा गाडी चलाउन नपाइने भएको छ । संक्रमितको संख्या बढ्दै जाने तर सर्वसाधारणले
सतर्कता अपनाउने तर्फ ध्यान नदिएका कारण अब उपत्यकामा कडाई गर्न लागिएको हो । काठमाण्डौ उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहीवारदेखि लागू हुने गरी नयाँ नियम लागू गरेका छन् । जसमा सां’झ ८ वजेपछि गाडी चलाउन पाइने छैन । निषेधाज्ञा समेत थप गरिने भएको छ ।***अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***मोरङ । सङै जिउने सङ्गै मर्ने कसम खाएका पती–पत्नीको मृत्यु एकैसाथ भएका घटनाहरू विरलै सुन्न पाइन्छन् । त्यस्तै घटना मोरङको सुन्दरहरैँचामा घट्न पुगेको छ ।
मोरङको सुन्दरहरैँचामा डेढ घण्टाको अन्तरालमा मृत्यु भएका श्रीमान् श्रीमती स्थानीय लोहन्द्रा घाटमा दाहसंस्कार भएको छ। सुन्दरहरैँचा १२ नं वडा खोर्सानेमा पत्नीको मृत्यु भएको १२ घण्टा पनि नबित्दै पतीको पनि मृत्यु भएको छ ।
आइतवार राती १० बजे ९४ वर्षीय श्रीमती पवित्रादेवी ओझाको मृत्यु भएको थियो । बिहान श्रीमतीको सद्गतिको लागि लासलाई चितामा चढाउँदै गर्दा ९६ वर्षीय खडानन्द ओझाको पनि मृत्यु भएको थियो ।
भोजपुर स्थायी ठेगाना भई हाल सुन्दरहरैँचा –१२ खोर्सानेमा बसोबास गर्दै आएका ओझा दम्पतीका चार छोरा र चार छोरी गरेर आठ जना सन्तान रहेका छन्। सोमवार डेढ घण्टाको अन्तरालमा दुवै जनाको लोहोन्द्रा घाटमा सदगती गरिएको पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ ।
बिहान पवित्रादेवीको लास निकाल्दा कुकुरले पटक पटक बाटो छेकेको र पतीको लासमा आगो सल्काउन बोकेको बाँसमा गोमन सर्प बेरिरहेका अवस्था फेला परेको स्थानीयले बताएका छन् ।
Previous शत्रुले पनि झुक्याउन सक्दैनन् यी ५ राशिका व्यक्तिलाई, हुन्छन् निकै चलाख र वुद्धिमान
Next वाईसीएल कार्यकर्ताले प्रदेशकी सांसद विमला वलीले चु’म्मा गरेको रोमान्टिक तस्बिर फेसबुकमा राखेपछि…